राष्ट्रिय समाचार | Online Rautahat
डा. भट्टराईले नयाँ अर्थमन्त्रीलाई सुझाए तीन नारा, अनुशरण गरे देश बन्ने दाबी
१५ फागुन, काठमाडौं । नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई अनुत्पादक क्षेत्रमा भइरहेको लगानी र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केन्द्रित हुन सुझाव दिएका छन् ।
पूर्वी पाल्पाका स्थानीयकाे दुःख– खानेपानी लिन दुई घण्टाको पैदल
१५ फागुन, पाल्पा । पूर्वी पाल्पाका पूर्वखोला, निस्दी गाउँपालिका र रामपुर नगरपालिकाको डाँडा बस्तीमा खानेपानीको अभाव भएको छ । मुहान सुक्न थालेपछि यहाँका स्थानीय बासिन्दा खानेपानीका लागि एक–दुई घण्टा पैदल हिँडेर पानी बोक्न बाध्य छन् ।
बन्दको विकल्प खोज्न माग
अर्घाखाँची – भुमिकास्थान ९ ढिकुराका लालबहादुर बलाल मंगलबार जिल्ला पशुसेवा कार्यालयको काममा सन्धिखर्क आए । कार्यालयमा फोटो चाहिने भएपछि उनी फोटो खिच्न सन्धिखर्क बजारतर्फ लागे ।
हाम्रै नेपालमा ! जहाँ धाराबाट दूध आउँछ
काठमाडौं, ८ फागुन । धाराबाट के आउँछ ? जवाफका लागि पर्खिनु नै पर्दैन–‘पानी’ । लतिलपुरको इकुडोलमा भने धाराबाट पानीमात्र होइन, दूध पनि आउँछ । किसानको घरबाट दूध संकलन केन्द्रसम्म दैनिक धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न यस्तो तरिका अपनाइएको हो।
क्यान्सरको औषधि नेपालमै उत्पादन हुने
काठमाडौं, फागुन ८ / नेपालमा क्यान्सर रोगी कति छन् भन्ने कुनै आधिकारिक तथ्यांक छैन । क्यान्सरको उपचार प्रदान गर्ने अस्पतालहरुमा आउने रोगीको संख्या पछिल्ला वर्षहरुमा बढिरहेको तथ्यांक छ ।
काठमाडौं, ८ फागुन । सरकारले प्रदेशको कामकाजका लागि अहिलेसम्म एक हजार कर्मचारी खटाइसकेको छ । जसमध्ये एक सयको हाराहारीमा मात्रै कार्यस्थल पुगेका छन् । बाँकी कर्मचारी प्रदेशमा जान अटेर गरेर बसेका छन् । धेरैजसो बीचबाटोबाटै हराएका छन् ।
काठमाडौं, फागुन ८ / जन्ममिति विवादमा आएका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको पाँचौं जन्ममिति खुलेको छ ।
पोखरामा बम विष्फोट, पत्रकार र प्रहरी घाइते
८ फागुन, पोखरा। कस्कीको विजयपुरमा बम विष्फोटमा एक प्रहरी र पत्रकार घाइते भएका छन् ।